बेलायतमा कोरोनाबाट एकैदिन ९५३ को मृत्यु » Gurkha Radio- गोर्खा रेडियोGurkha Radio- गोर्खा रेडियो
बेलायतमा कोरोनाबाट एकैदिन ९५३ को मृत्यु
/ २८ चैत्र २०७६, शुक्रबार २१:४५ प्रकाशीत
लण्डन । बेलायतमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या निरन्तर बढ्दै गैरहेको छ । शुक्रबार प्राप्त पछिल्लो जानकारी अनुसार बेलायतमा गएको २४ घन्टामा थप ९ सय ५३ जनाको मृत्यु भएको मिररले उल्लेख गरेको छ ।
मृत्यु हुनेहरुमा ८ सय ६६ जना इंग्ल्याण्डमा, ४८ जना स्कटल्याण्डमा, २९ जना वेल्समा र १० जना नर्दर्न आएरल्याण्डका रहेका छन् । आज दिउँसो ३ बजेसम्मको तथ्यांकको आधारमा बेलायतमा कोरोनाको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या ९ हजार १६ पुगेको छ । विश्वभरिमा कोरोनाबाट मर्नेको संख्या एक लाख नाघिसकेको छ ।
बेलायतको तापक्रम बढ्दै जाँदा लकडाउन उलंघन गर्नेहरुको पार्कमा भीड लाग्न थालेपछि कतिपय पार्कहरु बन्द गरिएका छन् भने प्रहरीले समेत निगरानी राख्ने गरेको छ । लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रहरीले सवारी साधन तथा पैदलयात्रीलाई सोधपुछ गर्न थालेको छ । आउँदो सोमबारबाट प्रथम चरणको तीन हप्ते लकडाउनको अवधि समाप्त हुँदैछ । कोरोना भाइरस संक्रमण र मृत्युदर बढ्दै गएका कारण लकडाउनको अवधि बढ्ने निश्चित छ ।
१. म्याकडोनाल्ड लगायत ड्राइभथ्रु रेष्टुरेन्टमा टेबल सर्भिस गर्न नपर्ने
२. २४ घण्टाभित्र बेलायतमा ६ हजार बढी संक्रमित
३. बेलायतमा कोरोना संक्रमितको संख्या ४ लाख नाघ्यो
४. एनआरएनए अफ्रिका आपतकालीन राहत कोषबाट मृतकका परिवारलाई एक लाख सहयोग
५. प्रवासी प्रवाहको उन्नाइसौ श्रृङखला मुक्तक बिशेषमा मुक्तककार रामकाजी कोने
१. प्रवासी प्रवाहको उन्नाइसौ श्रृङखला मुक्तक बिशेषमा मुक्तककार रामकाजी कोने
२. महामारीमा मिडियाले खेले उत्साहजनक भूमिका
३. एनआरएनए अफ्रिका आपतकालीन राहत कोषबाट मृतकका परिवारलाई एक लाख सहयोग
४. बेलायतको एयरपोर्टमा नेपालीहरुलाई थप सहज
५. बेलायतमा आइसोलेशनको नियम उलंघन गरे १५ लाखसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने